Kedu ihe bụ Buzz About the YouTube kacha ọhụrụ site na Kidfluencers? - SoNuker
Kidfluencers na-eme mgbanwe na ụwa nke mgbasa ozi YouTube
Y’oburu n’echiche na sọọsọ ndị okenye, ndị egwuregwu, na ndị a ma ama nwere ike bụrụ ndị na - ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mgbe ahụ ikekwe oge eruola ịchebara ya echiche nke abụọ. Ofmụaka nke oge a adịghị agba n'ọsọ ahụ megide ndị ogbo ha tozuru etozu.
N'oge a, enwere ihe a na-akpọ ụmụaka influencers ma ọ bụ kidfluencers, ndị na-ewu ewu na netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta, ọkachasị na YouTube. Parentsmụaka ndị a bụ ndị nne na nna na-ese ihe nkiri mgbe ha na-eme ihe dị iche iche, dị ka inyocha ihe ụmụaka ji egwuri egwu, na-eduzi ọrụ sayensị, na-arụ ọrụ nka, na ndị dị otú ahụ.
N'iburu na ha gbasiri ike na-agbaso na itinye aka dị ukwuu, ndị na-eme ihe nkiri na-abanye n'ọtụtụ mkpọsa mgbasa ozi maka ọhụụ na mmata dị ukwuu. Ndị na-akpọsa ngwa ahịa na-emefu ego iji nweta ha na vidio ndị a n'ihi na ha nwere ezigbo ohere ịgakwuru ndị na-ege ha ntị — ndị nne na nna, ụmụaka, na ezinụlọ.
Ọ bụghị ihe niile ndị na-akụ nkọ na-ekwu ka a na-anabata
Agbanyeghị, ndị a na-amaghị ama na-ewu ewu ugbu a maka ebumnuche na-ezighi ezi. Otu nnyocha e mere n’oge na-adịbeghị anya gosiri na ndị na-akọ akụkọ ihe na-eme na YouTube na-anata nde kwuru nde iji kwalite ọ drinksụ drinksụ na-aba n’anya na nri ratụ ratụ — ihe a na-ewereghị dị ka ihe dị mma nye ụmụaka nọ n’afọ ndụ ha.
Fọdụ ndị na-eme nchọpụta sitere na iouslọ Akwụkwọ Mahadum New York a na-ahụ maka Ahụ Ike Ọha na Ahụhụ lebara anya n'ime ise kacha ewu ewu na YouTube. Ndi otu a nyochara ihe nlere vidio ha kacha ewu ewu na nkwalite nke nri ndi ediri site na ha.
Nnyocha ahụ kpughere ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ na ndị mmadụ na-ekiri vidio nke ndị na-akọ akụkọ ihe nkiri na-egosipụta ihe ọ drinksụ andụ na-abaghị uru na nri iri nri 1 ijeri ugboro! Ọzọkwa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 90 nke vidio ndị a gosipụtara ọdịnaya nke nri nri ratụ ratụ nke na-adịghị mma. E wezụga nke ahụ, nri na-adịghị mma, nri enweghị nri dị ka nkịta na-ekpo ọkụ, bụ ihe na-agbanwe agbanwe na ọtụtụ vidiyo kidfluencer.
Ryan Kaji, ị dị afọ itoolu YouTuber si Texas, bụ onye na-akwụ ụgwọ kacha akwụ ụgwọ na netwọkụ mmekọrịta. Ryanwa Ryan, usoro YouTube nke o ji aka ya kee, bụ ihe mere o ji ruo ebe a n'oge ọ dị obere. Mana ọ bụghị ngwaahịa nri niile e gosipụtara na chanel ya ka akwadoro maka ụmụaka. Maka ụmụaka ndị ahụ na-ekiri vidio ndị a, echiche nke nkwado dị oke nghọta-ka ha ghara ịghọta. Mana agọnarị eziokwu ahụ, na mgbasa ozi ndị a na-akwalite àgwà nri na-adịghị mma.
Nkwụsị na ikpughe ụmụaka
Kidsmụaka gburugburu ụwa na-ekpughere ọtụtụ imepụta mkpọsa TV na-egosipụta ihe oriri kwa afọ. Mgbe agbakwunye vidio YouTube site n'aka ndị na-akụ azụ na akara ahụ, ọ nwere ike ịpụta nnukwu nsogbu maka nne na nna na ụmụaka ịrapara n'àgwà iri nri dị mma. YouTube nwere ike bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ karị na 2020 n'ihi ọrịa na-efe efe COVID-19, nke mere ka ndị nne na nna si n'ụlọ na-arụ ọrụ ma gbalịsie ike ijide nguzozi n'etiti ndụ onwe ha na nke ọkachamara.
N'iburu ọnụ ahịa azụmahịa ụmụaka nke ụmụaka na-ele, ọ bụ oge na ndị ọchịchị echebara echiche ga-eme ihe ga-eme ka ọnụọgụ ụmụaka ghara ịnabata ụdị ọdịnaya a. Mkpa nke oge bụ gburugburu dijitalụ nke na-enyere nri dị mma ma ghara ịkụda ya. Nke a bụ ihe kpatara YouTube anaghị ekwe ka mgbasa ozi akwụ ụgwọ na ntanetị a na-akpọ ụmụaka. Netwọk mmekọrịta na-agbaso ụkpụrụ nduzi siri ike nke pụtara igbochi ụfọdụ edemede site na mgbasa ozi, gụnyere nri na ihe ọ beụveraụ, na ,mụaka YouTube.
Whomụaka ndị na-ahụ ọdịnaya nke ndị na-akọ akụkọ ihe mere eme na-akwalite nri ratụ ratụ nwere ike ịdaba n ’anụbiga nri ókè — ihe nwere ike ibute oke ibu na nsogbu ahụike ndị ọzọ. N’iburu n’uche ụdị ụdị ọdịnaya a nwere n’ebe ụmụaka nọ, YouTube etinyela uche nke ukwuu na nchebe ezinụlọ na ụmụaka.
N'ezie, Google ekwuputala na ọ ga-amachibido mgbasa ozi nri ratụ ratụ nke enyere ụmụaka aka ka ha pụta n'igwe okwu ya. Anyị nwere ike ịtụ anya na ndị gọọmentị etiti na ndị na-achịkwa steeti nwere ike iwusi ike ma mejuputa iwu siri ike metụtara mgbasa ozi nri ratụ ratụ nke ndị na-eme ihe ngosi.
O zughi ezu maka ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ iji kpalie ire ụtọ nke ndị nwere ezigbo ezé. Ka ha nwee ike ịlanarị na mpaghara asọmpi asọmpi ma setịpụrụ onwe ha akara, ha…